घरमा यी पवित्र वस्तु कहिल्यै नछुटाउनु : माता लक्ष्मी प्रशन्न हुनुहुन्छ ! - Sakaratmak Soch
घरमा यी पवित्र वस्तु कहिल्यै नछुटाउनु : माता लक्ष्मी प्रशन्न हुनुहुन्छ !
तपाई दिन भरी कयौँ काम गर्नुहुन्छ ताकि लक्ष्मी माता खुशि भएर तपाईको घरमा खुशी छाओस् । त्यहि हामी मध्य कोहि त यस्ता पनि छौँ जो जिवन भरि कडा परिश्रम गर्दा पनि रोजी-रोटीको जुगाड गर्न बाहेक अरु कमाउन सकिन्न।तर के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा सकरात्मक र नकरात्मक ऊर्जाको कति धेरै प्रभाव पर्छ ? घरमा सकरात्मक र नकरात्मक ऊर्जासँग जोडिएको चिजहरुलाई वास्तुशास्त्र भनिन्छ ।
तर आधुनिक समयका मानिसहरु वास्तुशास्त्रमा खसै बिश्वास गर्दैनन् । जबकि वास्तुशास्त्रले हाम्रो जीवनको दिशालाई नयाँ दिशामा मोड्न सक्छ। जन्नुहोस् वास्तुशास्त्रका अनुसार घरमा कुन कुन चिजहरु राख्दा तपाईको घरमा लक्ष्मीको बास हुनेछ।घरमा राख्नुहोस् बासुरी:बासुरीलाई बास्तु दोष निर्मुल गर्नमा निकै खास मानिन्छ। यदि आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउन छ भने घरमा चाँदिको बासुरी राख्न राम्रो हुन्छ।
वास्तु शास्त्र अनुसार, सुनको बासुरी घरमा राख्दा घरमा लक्ष्मीको वास बनि रहन्छ । यदि सुन वा चाँदिको बासुरी सम्भव नभए वाँसको बासुरी पनि राख्दा राम्रो हुन्छ ।भगवान गणेशको नृत्य गरेको मुर्ति:भगवान गणेश हर रुपमा मंगलकारी हुन्, तर धन-लक्ष्मीको दुख दुर गर्नको लागि नृत्य गरेको गणेश मुर्ति घरमा राख्नाले निकै शुभ मानिन्छ। भगवान गणेशको यस्तो मुर्ति घरको मुख्य द्वारमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यदि मुर्ति छैन भने तस्बिर पनि राख्न सकिन्छ।
घरको मन्दिरमा राख्नुहोस् लक्ष्मी र कुबेरको मुर्ति या तस्बिर:देवी लक्ष्मीको तस्वीर वा मूर्ति त लगभग सबैको घरमा हुन्छ, तर धन-धान्य पाउनको लागि देवी लक्ष्मीको साथै भगवान कुबेरको मूर्ति वा तस्वीर राख्न जरुरी हुन्छ । स्थाई धन लाभको लागि घरमा देवी लक्ष्मी र भगवान कुबेर दुबैको पुजा गर्नु पर्छ । भगवान कुबेर उत्तर दिशाका स्वामी मानिन्छ, त्यसैले उनलाई सँधै उत्तर दिशामा राख्नु पर्छ।
घरको मन्दिरमा शंख राख्न शुभ हुन्छ:वास्तुका अनुसार, शंखमा वास्तु दोष हटाउने अद्भुत शक्ति हुन्छ, जुन घरमा शंख राखिएको हुन्छ त्यहाँ जुन कुरा पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार, जुनको पूजा स्थलमा देवी लक्ष्मीको साथ शंखको स्थापना पनि गरिएको छ र पुज गरिन्छ भने त्यहाँ स्वयम लक्ष्मी माताको वास हुन्छ । यस्तो घरमा कहिले पनि धनको परिशानी हुँदै।
एकाक्षी नरिवल:नरिवललाई श्रीफल भनिएको छ र यसलाई देवी लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ, त्यहा संकट कहिले पनि नआउने मान्यता छ, न त कहिले धन-धान्यको कमी हुन्छ। यसैगरी वास्तुशास्त्रमा कुनै पनि काम सुरु गर्नुपूर्व ज्योतिषसँग परामर्श लिने गरिन्छ। राशि अनुसार काम नगर्दा कतिपयलाई असफलता मिल्ने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिले कुन काम गर्दा शुभ हुन्छ ? हेरौँ,
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापारका तुलनामा जागिर राम्रो हुन्छ । बास्तुसँग सम्बन्धित काम गर्दापनि मेष राशिलाई फाइदा हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा रार्मो गर्न सक्ने यो राशिले फलामको काम गर्नु हुँदैन । यो राशिको शुभ रङ्ग रातो हो । रातो कपडा लाएर काम गर्ने यो राशिका व्यक्ति सफल हुन्छन् । यो राशिका मानिसले मुसुरोको दाल साइत हेरेर दान गर्नु शुभ मानिन्छ ।
वृषः यो राशिभएकाहरुलाई कलाकारिता फाप्छ । व्यापार गर्ने यो राशिका मानिसहरुले गाडीका पाठपूर्जा, इलेक्ट्रिक सामानको व्यापार, वा चलचित्र वा सङ्गीतसंग सम्बन्धित व्यापार गर्यो भने निकै फाप्छ । सेतो रङ्ग यो राशिको शुभ रंग हो । किरानाको व्यापार पनि फाप्ने यो राशि भएका व्यक्तिहरुले हरियो कपडा हत्तपत्त प्रायस् गर्नु हुन्न । यो राशिलाइ पनि समग्रमा जागिर नै फाप्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मिथुनः यो राशि भएका व्यक्तिहरुले जागिर नै गरेको राम्रो हुन्छ । शुभ रंग हरियो भएको यो राशिका व्यक्तिहरु कला क्षेत्रमा निकै राम्रो हुन्छन् । यिनीहरुले अध्यापन क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न सकछन् । यी राशि भएका व्यक्तिहरुले एकाउन्ट, फाइनान्स वा गणित विषय लिंदा धेरै राम्रो हुन्छ । व्यापारका हिसावले यो राशिका मानिसहरुलाई कृषिजन्य सामाग्री वा कृषिको व्यापार निकै फाप्छ ।
कर्कटः यो राशि भएका व्यक्तिले जागिर भन्दा व्यापार नै गरेको रार्मो । जलीय वस्तु, सख्खर, चामल, चाँदी, शिक्षण, वस्त्र, स्त्रीको कपडा, रेशम, सौन्दर्य सामाग्री, रंग, लगायतका बस्तुको कारोबार गर्दा यो राशिलाई फाइदा हुन्छ । जागिर नै गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र राम्रो छ ।सिंहः यो राशिका व्यक्तिलाई जागिर नै फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले बसेर गर्ने काम गर्दा फाइदा हुन्छ । लेखापाल, कम्प्युटरको काम आदि बसेर गरिने काम गर्दा यो राशि भएका व्यक्तिलाई निकै फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले व्यापार नै गर्ने हो भने कपडाको व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कन्याः कन्या राशि भएका व्यक्तिलाई जागिरको तुलनामा व्यापार नै फाप्छ । चिनीजन्य बस्तुको व्यापार गर्दा यो राशिलाई निकै फाइदा पुग्छ।तुलाः यो राशिलाई जागिर बढी फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले अभियन, संगीत, सेना, व्यवस्थापन, कानून, बैंक, बिमा, फाइनान्स, मेसिनरी र कम्प्युटरको काम गर्दा निकै राम्रो हुन्छ । व्यापार नै गर्ने हो भनेपनि यहि क्षेत्रसंग सम्बन्धित काममा हात हाले फाइदाजनक हुन्छ।
वृश्चिकः यो राशि भएका व्यक्तिलाई जागिर बढी फाप्छ । रक्षा, कानून, सामाजिक सेवा, राजनीति क्षेत्र यो राशिलाई फाप्छ । रातो रंग शुभ रंग भएको यो राशिका व्यक्तिहरुलाइ सरकारी जागिर पनि निकै फाप्छ।धनु: सुनचाँदीको व्यवसाय, किराना, सामाजिक सेवा, अध्यात्म गुरु, म्यानेजर लगायतका काम गर्दा यो राशिलाई निकै राम्रो हुन्छ । यो राशिलाई पनि जागिरभन्दा व्यापार राम्रो हुन्छ। व्यापारमा पनि ठेक्कापट्टामा लाग्ने हो भने यो राशि भएका व्यक्तिले निकै राम्रो आम्दानी गर्छन्।
मकर: यो राशिलाई पनि प्राय स् व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ । यो राशिले पानीसंग सम्बन्धित काम भने नगरेको राम्रो।
कुम्भः यो राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापार फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्र अधिकांश मकर राशिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । किनभने यी दुवै राशिको स्वामी शनि हो । त्यसैले यो राशिलाई पनि प्राय स् व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ ।
मीनः यो राशि भएका व्यक्तिलाई बढी जागिर वाप्छ । भेइकल, गुप्तचर विभाग, फायर सर्भिस र अदालती सेवामा यो राशिलाई सफलता प्राप्त हुन्छ । यो राशिका व्यक्तिले सकेसम्म मसलाजन्य उत्पादनको काम नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा भाँडभैलो : मन्त्री आचार्यले लिन मानेनन् उर्जा मन्त्रालय, दीपक मनाङे भन्छन् ‘मलाई मुख्यमन्त्री नै चाहिन्छ’
सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो, कति पुग्यो ?
भरोसा आफुलाई गर यहाँ मौसम भन्दा छिटो मान्छे बादलिन्छन – मनछुने लाईनहरु
जीवनसाथीका लागि धेरै नै भाग्यशाली हुन्छन् यी राशि हुनेहरु !!